Xhuma futhi usebenze ku-FTP kusuka esigungwini se-Linux | Kusuka kuLinux
Xhuma bese usebenza ku-FTP usebenzisa i-terminal
Ukulayisha, ukulanda noma ukuphatha okuqukethwe kwe-FTP, sinenombolo engapheli yezinhlelo zokusebenza zemifanekiso, iFayilezilla ingenye yezintandokazi kakhulu. Kepha ungakwenza kanjani lokhu kusuka kulayini womyalo?
Ikakhulukazi lapho sisebenza kuseva futhi singenayo i-GUI, sidinga ukulayisha ifayela ku-FTP noma simane sisuse okuthile, sakhe ifolda, njll, senze noma yini futhi sinesiginali sethu kuphela, akukho okunye.
Ukusebenza neseva ye-FTP, umyalo owodwa wanele:
Sibeka umyalo we-ftp bese silandelwa ikheli le-IP (noma umphathi) we-FTP iseva esifuna ukuxhuma kuyo futhi yilokho, isibonelo:
Njengoba kukhonjisiwe esithombeni esingezansi, umsebenzisi uzosibuza, sibhala bese sicindezela Faka, Bese izosicela iphasiwedi, siyibhale bese siyacindezela Faka, ngomumo siyahamba!
Manje kulapho sibhala khona imiyalo kule Shell entsha okuyi-ftp shell, ngokwesibonelo ukuhlunga sisebenzisa umyalo ls
Kunemiyalo eminingi eminingi, ngokwesibonelo:
mkdir : Dala amafolda
chmod : Shintsha izimvume
i-del : Susa amafayela
Zibukeka njengalezi zeLinux, akunjalo? ... hehe, uma bebhala Usizo kugobolondo le-FTP bathola imiyalo abangayisebenzisa:
Umbuzo (futhi abanye bayazibuza) ngicabanga ukuthi ... ulilayisha kanjani ifayela kwesokudla?
Ukulayisha ifayela umyalo ngu thumela
Isibonelo, ake ngibe nefayela lami le- Ikhaya ifayela elibiziwe ividiyo.mp4 futhi sifuna ukuyilayisha kufolda ebizwa ngokuthi videos, umyalo uzoba:
Kufanele njalo bacacise igama levidiyo yokugcina, akunandaba ukuthi iyafana noma uma bengafuni ukuthi bashintshe, kufanele bayichaze ngokufanayo, kuyimpoqo.
Njengoba ilula njengaleyo, ilog / okukhiphayo ekubuyisayo kuyafana nalokhu:
kwasendaweni: ividiyo.mp4 kude: amavidiyo / videdo.mp4 umyalo we-PORT 200 uphumelele. Ukuvula uxhumano lwedatha yemodi engu-BINARY yokuhlola. 150 Ukudluliswa kuqediwe. Kudluliswe amabhayithi angu-226. 0 KB / isekhondi
Njengoba ngihlala ngikutshela, uma ufuna ukwazi ezinye izinketho eziningi, vele ufunde incwadi yemiyalo:
Noma funda imanuwali ku kwenye indawo kusuka ku-Intanethi.
Hhayi-ke, angizenzi sengathi lena yimanuwali enhle kakhulu kude nayo ... ukubeka izisekelo kuphela 😉
Noma kunjalo, ngithemba ukuthi kube wusizo kwabanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Xhuma bese usebenza ku-FTP usebenzisa i-terminal
Umnikelo omuhle !!!!
Uma ufuna ukwenza ukuxhumana okuzenzakalelayo nge »ftp» futhi akudingekile ukufaka umsebenzisi nokudlula, kufanele wakhe ifayili ku- $ HOME yomsebenzisi
.netrc enezimvume ze-chmod 600, equkethe:
umshini [igama-lichazwe-ngaphakathi- / njll / labaphathi] ukungena ngemvume [igama lomsebenzisi] passwd [passwdor]
Isihloko esihle umngani: D ..
Ngendlela, indikimba yangaphambilini ye-desdelinux ayisadingeki kuphrojekthi yami selokhu ngakha ingqikithi entsha yami futhi ekugcineni ngakhetha iDrupal njenge-CMS esikhundleni se-WordPress.
Bengivele ngazi ukuthi uzokhetha iDrupal (ngokwakhiwa kwengqikimba, iDrupal ifana neBlogger kuma-steroids).
Mayelana nokuvuselelwa, kulula ukusebenzisa i-drush kunokulawula yonke into ekugcineni kwe-FTP.
I-Well Drupal ingaphezu nje kwe-Blogger kuma-steroids: D ... Ihlinzeka ngokuqukethwe okuyinkimbinkimbi kakhulu futhi iyasabazeka kakhulu. Ijika lokufunda likhulu kakhulu kuneleJoomla ne-abysmal uma liqhathaniswa ne-WordPress, kepha iDrupal ayikukhawuleli kunoma yini futhi ijubane layo lifanele umzamo :).
Kuhle kakhulu. Bengivele ngithi kungani le miyalo ivela lapho usebenzisa iFayileZilla.
USaul Uribe kusho
Ngiyazi ukuthi inhloso yokuthunyelwe ukukhombisa ukuthi ungaxhuma kanjani ngomyalo owodwa, kepha ngincoma impela umphathi wamaphakathi nobusuku (mc), ikuvumela ukuthi uxhume ku-FTP / SFTP futhi uthumele (ulayishe) amafayela ngendlela elula.
Awu, lapho umnikelo wami emphakathini. Jabulela
Phendula uSawule Uribe
Ngenza umkhuba odinga ukuthi ngixhumane neseva ye-FTP kusuka ku-kali linux VM futhi ingitshela umyalo ongatholakali lapho ngifaka i-ftp noma i-man ftp kuyo.
Ngiphuthelwa okuthile, akunjalo?
Ngisanda kufaka, futhi ngixhuma kahle kuseva yami yendawo, futhi lapho ngizama ukuthumela ifayela ngithola iphutha
"553 Ayikwazanga ukudala ifayela."
lo myalezo ngiwuthola. Yini engahle yehluleke?
I-Bash: Guqula ikholomu yombhalo uyenze umugqa